Brinker International bipụtara nsonaazụ Q1 2022 ahọpụtara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Brinker International bipụtara nsonaazụ Q1 2022 ahọpụtara
Brinker International, Inc. (NYSE: EAT) taa kwuputara nsonaazụ azụmaahịa ahọpụtara maka nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 wee nye mmelite azụmaahịa maka nkeji nke abụọ nke mmefu ego 2022 tupu ụbọchị Brinker International Investor Day nke a ga-eme na Ọktọba 20, 2021 .
Wyman Roberts, Onye isi ndị isi na onye isi ala kwuru, " nkeji nkeji mbụ nke Brinker butere ahịa dị mma ma na-aga n'ihu karịa ụlọ ọrụ na okporo ụzọ. "Mana ịwa ahụ COVID na-amalite n'August mere ka nsogbu ọrụ na ngwa ahịa ka njọ ma metụta oke ala na ala anyị karịa ka anyị tụrụ anya ya. Anyị na-azaghachi ndị isi ikuku COVID ndị a na-elekwasị anya na ntinye ego na ntinye aka, yana soro ndị mmekọ anyị na-arụkọ ọrụ iji nwetakwuo nkwụsi ike nke gburugburu usoro ọkọnọ. Na mgbakwunye, anyị emeela ihe ntinye ọnụahịa ozugbo, na-abawanye ebumnuche anyị zuru oke na 3% - 3.5%, iji wepụta ọnụ ahịa ọnụ ahịa yana ichebe oke ka anyị na-aga n'ihu.
Akụ gbasara ego 2022 Isi ihe - Nkeji Nke Mbụ
Ire ụlọ ọrụ Brinker International na nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 ruru $859.6 nde ma e jiri ya tụnyere $728.2 nde na nkeji mbụ nke mmefu ego 2021.
Ego eji arụ ọrụ na nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 ruru $25.6 nde ma e jiri ya tụnyere $24.4 nde na nkeji mbụ nke mmefu ego 2021. Ego eji arụ ọrụ, dị ka pasentị nke mkpokọta ego, na nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 gbadara ruo 2.9% ma e jiri ya tụnyere ya. 3.3% na nkeji mbụ nke mmefu ego 2021.
Oke na-arụ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, dị ka pasent nke ire ụlọ ọrụ, na nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 gbadara ruo 10.4% ma e jiri ya tụnyere 11.6% na nkeji mbụ nke mmefu ego 2021.
Ndị isi ihe kpatara mbelata na oke ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ bụ 150 bps nke ụgwọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị elu yana 60 bps nke ọnụ ahịa ngwa ahịa dị elu. Ọnụ ego ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ mụbara n'ihi ọnụ ahịa ahịa yana mmụba bara uru. Mmụba oge mgbatị ahụ nwa oge na ụgwọ ọzụzụ sokwa na mmụba ahụ.
Ego netwọk n'otu akụkụ agbazere, na ndabere GAAP, na nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 ruru $0.28 ma e jiri ya tụnyere $0.23 na nkeji mbụ nke mmefu ego 2021.
Ego netwọk n'otu òkè agbazere, ewezuga ihe pụrụ iche, na nkeji mbụ nke mmefu ego 2022 ruru $0.34 ma e jiri ya tụnyere $0.28 na nkeji mbụ nke mmefu ego 2021.